शीतल निवासमा देखिएको यो तस्बीर किन बन्यो एकाएक भाइरल ? – Khabar Aajako
शीतल निवासमा देखिएको यो तस्बीर किन बन्यो एकाएक भाइरल ?
आजको खबर | प्रकाशित : २०७५ कार्तिक ६ गते १:१५
यो पटकको दशैं सकिँदै छ । दशैंअघि वामदेवका लागि रामविरले गरेको त्यागले तातिएको नेपाली राजनीतिक माहोल दशैंसँगै शीतल निवासको तस्वीरले ‘आगो’ नै लगाइदिएको छ। नेपालको मौजुदा संविधानमै देश अब समाजवाद उन्मुख हुने भनिएको छ।
गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार जनताबाट चुनिएर जनताकी छोरी देशको नम्बर वान पोजिशनमा पुगेकी छन्। राष्ट्रपति पद नेपालको पहिलो वरीयतामा छ।
गणतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि शासन गर्छन्। शासन सत्तामा पुग्नेहरु जनताका सेवक हुन्छन्। जनताले मन पराएनन् भने सत्तामा बसेकालाई सडकमा झार्न सक्छन्। जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई ‘मालिक’ र सत्तामा बस्नेलाई सेवक भनिएको हो।
हामी लामो राजतन्त्रबाट भर्खरै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका हौं। हाम्रा हरेक गतिविधिमा राजतन्त्रतात्मक सोँच झल्किन्छ। हामी जनता आफूलाई ‘मालिक’ ठानिरहेका छैनौं। सेवकले पनि आफूलाई सेवक सम्झेका छैनन्।
उनीहरुमा तत्कालीन राजाले प्राप्त गरेको पहिलो वरीयताको पदमात्र छैन, उनीहरुको सोँच पनि सँगै छ। यसैको उदाहरण हो शीतल निवासमा घुँडा टेक्ने र टेकाउने दृष्य। यो दृश्यमा पूर्व प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रपतिमात्र देखिएका छैनन् नेपालको गणतन्त्रमा शासन चलाइरहेकाहरुको वास्ताविक अनुहार पनि उदांगो भएको छ। यो तस्वीर पगत एक तस्वीरमात्र हुन सक्दैन।
यस भित्र हाम्रा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सोँच पनि देखिएको छ। उनको गणतन्त्रप्रतिको विश्वास झल्किन्छ, गणतन्त्रप्रतिको लगाव र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व पनि।
राजाले पहिलो वरियता प्राप्त गर्दा जनतालाई झुकाएको आफ्नै आँखा अगाडी देखेकी, आफै कति पटक झुकेकी विद्या भण्डारी हाल त्यो पदमा छिन्। उनीमा पनि तत्कालीन राजाले गरेको व्यवहार गर्न मन लाग्दो हो।
त्यसैले त उनी भोटो हेर्न पनि छुटाउँदिनन् पशुपति पनि जान्छिन्। वशन्त पनि श्रवण गर्छिन्। दशैंमा पनि टीका लगाइदिइन् भलै घुँडा नै टेकाएर भए पनि। हुन त उनी साम्यावादी सिद्धान्तको आवरणमा राजनीतिक गर्ने नेकपा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष हुन्।
यो पार्टीका तत्कालीन महासचिब उनका श्रीमान मदन भणडारीले कुनै बेला राजालाई श्रीपेच झिकेर राजनीति गर्न आउनुभनी खुलामञ्चबाट निम्तो दिएको भन्ने गरिन्छ। के भण्डारीले पनि त्यति बेला राजाले गर्ने सबै व्यवहार आफूलाई पनि गर्न मन लागेर त्यसो भनेका होलान ? प्रश्न उठ्छ। जवाफ कसले दिने।
मलाई शीतल निवासको यो तस्वीर देखेपछि मदन भण्डारीले स्वर्गबाट नेपालतर्फ हेर्दा यो तस्वीर देखे भने के सोचेहोलान भन्ने जिज्ञाशा भएको छ । यो जिज्ञाशा मेरोमात्र होइन होला मदन भण्डारीलाई आदर्श मान्ने सच्चा उनका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा पनि हुनुपर्ने हो ।
राष्ट्रपतिले टीका लगाई दिँदा एक जनालाई घुँडा टेकाएको सोचेकी हुनुपर्छ ।
तर, उनले सबै नेपालीलाई घुँडा टेकाएको भान भएको छ । गणतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको भान भएको छ । जनताको मानर्दन भएको छ । राष्ट्रपति पदको गरिमा घटाउने काम भएको छ ।
विद्या भण्डारीको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कार्यकाल अँझै करिब ४ वर्ष छ । उनकै तत्कालीन पार्टी र उनकै गुटका नेताको शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकारको आयू पनि लगभग त्यति नै छ ।
सरकार र राष्ट्रपतिबीचमा सल्लाह हुने हो भने अब नेपाल समाजवादमा पुग्न कुनै माईका लालले रोक्न सक्दैन भन्ने शीतल निवासको यो समाजवाद उन्मुख तस्वीरले कम्तिमा मलाई भने प्रस्ट पारेको छ । बाँकी भने सबका मालिक उनै भगवानले जानुन ।
२०७५ कार्तिक ६ गते १:१५ मा प्रकाशित
अफगानिस्तान प्रिमियर लिग : सन्दीपको टिम सेमिफाइनलमा पराजित
बालुवाटारको ‘ओली’ भेलाको चौतर्फी विरोध ! सरकारी निवास की पार्टी प्यालेस ?
विप्लवलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह! मान्लान् त विप्लवले ?
लोक सेवा विज्ञापन विवादः सर्वोच्चले खोल्यो कर्मचारी भर्नाको बाटो